Ukukhiqiza ama-Nanospheres we-Biodegradable - Hielscher Ultrasound Technology
Amakhemikhali angama-micro and nanospheres angakhiwa ngenqubo eqhubekayo, yokuxhumana no-ukungcola okungase iqhutshwe kalula ngaphansi kwezimo eziyinyumba.
I-micro-nanosphres (MS, NS) engakhiwe nge-poly (lactide-coglycolide) (i-PLGA) noma ezinye izinto ziyizinhlelo zokuhambisa izidakamizwa kanye ne-antigen ezinamandla okubheka izidakamizwa kanye nokubhekela i-antigen. Izindlela zanamuhla zokukhiqiza i-PLGA NS ziyizinqubo ezijwayelekile ze-batch futhi zihlushwa ubunzima bokuphakama ngaphansi kwezimo ezingenamthetho. Lapha, sethula indlela entsha nenhle yokukhiqiza i-PLGA NS ngokuqhubekayo, othintana nabo- futhi inqubo yokungcola okungaba lula ukugijima ngaphansi kwezimo eziyinyumba. Ngenkathi yonke inqubo yokukhiqiza, umkhiqizo uxhumane ngqo kuphela ngilazi engenamathe kanye nama-tubs Teflon®. Inqubo ingasetshenziswa ohlelweni oluvaliwe ukuvimbela noma yikuphi ukungcoliswa kwemvelo.
I-PLGA50: ama-nanoparticles ama-50 (i-Resomer® RG503H, i-Boehringer Ingelheim) yakhiqizwa ngokusebenzisa inqubo yokuchithwa / yokusuka kwe-solvide modified solvent . I-PLGA encibilikisiwe ku-dichloromethane (2 noma 5%) yahlakazeka ngo-0.5% (w / w) i-PVA-solution nge-setup yokuhlola yohlu olubandakanya ukugeleza okungenawo oxhumana naye ultrasonication cell. I-disperssion yama-O / W-ama-coarse yaqala kuqala nge-stirrer magnetic bese i-homogenized in the ukugeleza kwe-ultrasonic-ngokusebenzisa iseli (izinga lokugeleza kwezigaba ze-O no-W zazingu-1: 8). Ama-nanodroplets ama-PLGA-solvent ekuqaleni aqiniswa ngesikhathi sokuhamba kwamatayipi ukuze abe ama-nanoparticles we-PLGA. Ukuqina kokugcina kwezinhlayiya kwafinyelelwa kumthamo omkhulu we-0.5% ye-PVA isisombululo.
Umdwebo 1: Isethaphu yokuhlola yokukhiqiza ama-nanospheres we-PLGA
Umdwebo 2: Ukuklama ukugeleza kwe-ultrasonic-ngokusebenzisa iseli
I-nanoparticles ene-mean diameter yama-485 nm yayilungiselelwe kalula kusuka kwesisombululo se-PLGA esingu-2% ku-DCM kumandla we-32W we-sonication (ithebhu 1). Ukusatshalaliswa kwesayizi kwakuyi-mono-modal nge-tailing encane (isif. 3A). Ama-nanoparticle ubukhulu banda kusukela ku-175 kuya ku-755 nm ngokusho kwama-percententi angu-10 no-90%. Ukuphindaphindiwe kwenqubo yokukhiqiza kwakungcono njalo, njengoba kuboniswa ukuhlukahluka okuncane kuphela ekutheni ububanzi bezinhlayiya zisho. Ukunciphisa emulsion's Isikhathi sokuhlala ensimini yezingane kusukela ngo-14 ukuya ku-7s sinomthelela omncane kuphela usayizi we-nanoparticle. Ukuncipha kwamandla we-sonication kusuka ku-32 kuya ku-25W, kodwa, kubangele ukwanda okwenziwe usayizi wezinhlayiyana usuka ku-485 kuya ku-700nm, obangelwa ukuthungwa okungaphezulu kwe-curve distribution distribution (Fig. 3A). Ukunyuka okuphawulekayo, kodwa okwakunenani elikhulu ekutheni usayizi wezinhlayiya usho kusukela ku-485 kuya ku-600 nm kutholakale uma usebenzisa u-5% esikhundleni sesisombululo se-PLGA esingu-2%.
Ekugcineni, i-PLGA ye-hydrophilic eyengeziwe yayishintshaniswa ukuze i-hydrophobic ne-lower molecular weight PLA ingabi nezinguquko ezibonakalayo ku-particle ukuthi isayizi nobukhulu besayizi. Akukho ukungafani okwakubhekwa ku-morphology yezinhlayiyana ezahlukene zezinhlayiyana ezilungiselelwe kusuka ku-2% izixazululo ze-polymer. Bonke babonisa ububunjwa obuhle kanye nezindawo ezibushelelezi (Fig. 3B). Izinhlayiya ezenziwe ngesisombululo se-PLGA esingu-5%, noma kunjalo, zincane kakhulu, zabonisa indawo ephikisanayo, futhi zixube izinhlayiya ezimbili noma ngezinye izikhathi (isib. 3C).
Ithebula 1. Ububanzi obuphakathi kwe-PLGA50: ama-nanospheres ama-50 alungiselelwe ngaphansi kwezimo ezahlukene. Okushiwo amabheki amabili ± ukuphambuka okuphelele.
Umdwebo 3: i-PLGA nanoparticles. (A): Ukusabalalisa ubukhulu bezinhlayiya ezilungiselelwe amandla e-polymer okuhlushwa / ukukhishwa kwe-son of 2% / 32W, 5% / 32W, no-2% / 25W%; isikhathi sokuhlala = 14 s. (B), (C): izithombe ze-SEM zezinhlayiya ezilungiselelwe ezixazululweni ezimbili nezi-5% ze-polymer, ngokulandelana. Isikhathi sokuhlala = ama-14; amandla we-sonication = 32W. Amabha amelela 1 micron.
I ukugeleza kwe-ultrasonic-ngokusebenzisa iseli watholakala ukuthi ufanelwe kahle ukukhiqizwa kwe-emulsion-solvent / evaporation esekelwe ekukhiqizeni ama-nanospheres e-biodegradable nanospheres. Ucwaningo lwesikhathi esizayo luzoqondiswa ekuthuthukisweni kwenqubo futhi lwandise amandla okufakelwa ukuze kutholakale nokufudumala okungcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukufaneleka kweseli ukulungiselela amanzi-in-amafutha Emulsions, isibonelo, ukuqhutshelwa phambili ekuqhutshweni kwezidakamizwa ezithwala izidakamizwa, kuzocutshungulwa.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nalolu hlelo lokusebenza lwe-ultrasonics.
Freitas, S .; Hielscher, G .; I-Merkle, i-HP; Gander, B .:Indlela Esheshayo Nendlela Elula Yokukhiqiza Ama-Nanospheres Angakhiwe Ngamafutha, ku: Amaseli aseYurophu kanye Nezinto Ezibonakalayo Vol. 7. Ukusekela. 2, 2004 (ikhasi 28)
Lolu lwazi lunikezwe eSwitzerland Society of Biomaterials